भोली सार्बजिनक बिदाबारे गृह मन्त्रालयको निर्णय यस्तो छ ! - Muldhar Post
भोली सार्बजिनक बिदाबारे गृह मन्त्रालयको निर्णय यस्तो छ !
मूलधार पोष्ट २०७५, ९ पुष सोमबार 1155 पटक हेरिएको
काठमाडाैं- विश्वभरका इसाई धर्माबलम्बीहरूले इसा मसिह अथवा जिसस क्राइस्टको जन्मदिनको उपल्क्षयमा मनाउने क्रिसमस मंगलबार परेको छ। अघिल्लो वर्षहरुमा सरकारले क्रिसमसको उपलक्ष्यमा सार्वजनिक बिदा दिने गरेकोमा यसपालि भने सार्वजनिक बिदाको विषयलाई लिएर सर्वसाधारणमा अन्योलको स्थिति शिर्जना भएको छ।
केहि दिन देखि क्रिसमसमा सार्वजनिक बिदा हुनुपर्ने माग राख्दै राष्ट्रिय ख्रीष्टियन महासङ्घले आन्दोलनका कार्यक्रम गरिरहेको भएता पनि सरकारले सार्वजनिक बिदा दिईएको सूचना भने निकालेको छैन। नेपाल राजपत्रमा २०७४ चैत १४ गते प्रकाशित गरेको गृह मन्त्रालयको सूचनामा उल्लेख गरिए अनुसार बिदा हुने बुझिएको छ।
गृह मन्त्रालयको सूचनाको २.२ मा ‘सम्बन्धित धर्म, संस्कृति, भौगोलिक क्षेत्र र स्थान विशेषका लागि मात्र सार्वजनिक बिदा हुने पर्वहरू’ भन्दै उल्लेख गरिएको छ।
त्यस अन्तर्गत खण्डको (छ) मा ‘क्रिसमस डे , पौस १० गते मंगलबार’ पनि समावेश भएको हुँदा मंगलबार क्रिसमसको दिन सम्बन्धित धर्म, संस्कृति, भौगोलिक क्षेत्र र स्थान विशेषका लागि मात्र बिदा हुनेछ। यस अर्थमा क्रिसमसको दिन ख्रीष्टियनका लागि मात्र बिदा हुनेछ ।
राष्ट्रिय ख्रीष्टियन महासङ्घका अनुसार नेपालमा लगभग देशभर करीब २० लाख अनुयायी तथा १२ हजार चर्च रहेको बताउने गरेको छ । विसं २०६४ देखि निरन्तर रुपमा दिइदै आएको सार्वजानिक बिदा यस वर्ष सरकारले ख्रीष्टियनका लागि मात्र कायम गरिएको हुँदा महासङ्घको गम्भीर ध्यानकर्षण भएको र यसले ख्रीष्टियन समुदायको भावनामा गहिरो चोट पुगेको भन्दै महासङ्घले विरोध जनाइरहेको छ ।बिगुल न्युजबाट